Ukubala ngefomula yokusabalalisa ebomvu kunokuba nzima kwaye kunzima. Isizathu salokhu sibangelwa kwinani kunye neentlobo zemigangatho kwifom. Njengoko kubalwa amaninzi kumathuba, i-Excel ingasetyenziselwa ukukhawuleza inkqubo.
Ingemvela kwiBhanomial Distribution
Ukunikezwa okuyingqamaniso kukubonelelwa ngokukhawuleza okunokwenzeka . Ukuze sisebenzise le ntengiso, kufuneka siqinisekise ukuba le miqathango ilandelayo idibeneyo:
Kukho izibalo ezizimeleyo.
Ngalunye lwezi zilingo lingahlelwa njengempumelelo okanye ukungaphumeleli.
Ubungakanani bempumelelo yimp.
Ubunokwenzeka ukuba nangoko iimvavanyo zethu ziyimpumelelo zinikezelwa ngolu hlobo:
C (n, k) p k (1 - p) n-k .
Kule ndlela ekhankanywe ngasentla, ibinzana C (n, k) libhekiselele kumlinganiselo wokulingana. Le yimiba yeendlela zokwenza udibaniso lwezinto ze- k ukusuka kwi- n . Le coefficient iquka ukusetyenziswa kwe-factorial, kwaye ngoko C (n, k) = n! / [K! (N-k)! ] .
Umsebenzi wokuqala kwi-Excel enxulumene nokusabalalisa okuqhelekileyo yi-COMBIN. Lo msebenzi ubala i-coefficient encinci C (n, k) , eyaziwa njengenani lokuhlanganiswa kwezinto zek e ukusuka kwisethi ye- n . Iingxoxo ezibini zomsebenzi ziyinombolo n yezilingo kunye n inani lempumelelo. I-Excel ichaza umsebenzi ngokulandela oku kulandelayo:
= COMBIN (inombolo, inombolo ekhethiweyo)
Ngaloo ndlela ukuba kukho izilingo ezili-10 kunye nempumelelo emi-3, kukho i- C (10, 3) = 10! / (7! 3!) = 120 iindlela zokwenza oku. Ukungena = I-COMBIN (10,3) kwisisele kwispredishithi iya kubuyisa ixabiso 120.
Olunye umsebenzi obalulekileyo ukwazi nge-Excel yi-BINOM.DIST. Kukho iingqungquthela ezine ezineengqungquthela zalo msebenzi kule ndlela elandelayo:
Inombolo_iyo inani leempumelelo. Yiloo nto esiye sichaza njenge k .
Iinlingo zizonke iinombolo zezilingo okanye n .
I-Probability_s yinto enokwenzeka yokuba yimpumelelo, esiye sichazwa njenge- p .
I-Cumulative isebenzisa igalelo elithile lokwenyaniso okanye lobuxoki ukubala inani lokusabalalisa. Ukuba le ngxabano iyinyani okanye i-0, ngoko umsebenzi ubuyisela ithuba lokuba sinempumelelo. Ukuba imbambano iyinyaniso okanye 1, ngoko umsebenzi ubuyisela ithuba lokuba siphumelele okanye ngaphantsi.
Ngokomzekelo, amathuba okuba ezintathu zineemali eziphuma kwiinkozo ezili-10 zithengi iintloko zinikwe ngu = BINOM.DIST (3, 10, .5, 0). Inani elibuyiselwe apha ngu-0.11788. Ubunokwenzeka ukuba ukusuka ekutshiseni iimali ezili-10 kwiintlobo ezininzi zintloko zinikezelwa ngu = BINOM.DIST (3, 10, .5, 1). Ukungena kweli seli kuza kubuyisa inani le-0.171875.
Le yilapho sibona ukukhululeka kokusebenzisa umsebenzi weBINOM.DIST. Ukuba asizange sisebenzise isofthiwe, siza kuhlanganisa kunye namathuba okuba singenazo iintloko, inye intloko enye, iintloko ezimbini okanye iintloko ezintathu. Oku kuya kuthetha ukuba siya kufuneka sibale amabini ahlukeneyo obuninzi kwaye sidibanise ndawonye.
Iinguqu ezidala ze-Excel zisebenzisa umsebenzi ohlukileyo olwahlukileyo ngokusabalalisa.
Excel 2007 kwaye ngaphambili sebenzisa i- = BINOMDIST umsebenzi. Iinguqulelo ezitsha ze-Excel zihambelana ngokutsha kunye nalo msebenzi kwaye ngoko = UBINOMDIST yindlela enye yokubala ngeenguqu ezidala.
20 Iingqungquthela Ngexesha
IRevista Vital Records
Ngaba uMongameli angamaMuslim?